UNWTO General Assembly Morocco: Tsiambaratelo mbola tsy nambara?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » UNWTO General Assembly Morocco: Tsiambaratelo mbola tsy nambara?
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba an'i Maraoka • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism
SEGOVIA, SPAIN - 26 MARTSA: ny sekretera jeneralin'ny World Tourism Organization, Zurab Pololikashvili, dia hita tamin'ny fisokafan'ny WTO Forum ny 26 martsa 2019 tao Segovia, Espana. (Saripikan'i Nacho Valverde / Europa Press avy amin'ny Getty Images)
Ny UNWTO dia niomana amin'ny fivoriambe faha-24 ao Maroc.
Loharanom-baovao notaterina eTurboNews, nahemotra ity GA ity, fa maninona ny sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili no manafina izany hatreto, tsy mampandre ny fanjakana mpikambana ao amin'ny UNWTO?
Ny tsaho avy amin'ny loharanom-baovao marobe dia milaza fa nanapa-kevitra ny fanemorana ny 2021 2 ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili.Fihaonambe faha-4 natao ho any Maraoka amin'izao fotoana izao.
Morrocco amin'ny maha tompon'andraikitra tompon'andraikitra azy dia tokony hanana fahalianana amin'ireo daty vaovao amin'ny hetsika UNWTO hialana amin'ny fifanolanana amin'ny fivoaran'ny COVID-19.
Fa maninona no mbola tsy nampandrenesina ireo mpikambana ao amin'ny UNWTO?
Ny UNWTO General Assembly, natao tao amin'ny Marrakech, no hetsika iraisam-pirenena avo lenta voalohany an'ny ONU hatramin'ny nanorenan'ny COVID-19 an'izao tontolo izao azy. Vaovao nasionaly ho an'izao tontolo izao izany rehefa voafidy tamin'ny Janoary tamin'ity taona ity ny sekretera jeneraly Zurab Pololikashvil.
Tamin'ny fotoan'ny fifidianana Zurab tamin'ny volana Janoary tany Espana dia nandalo loza nasionaly noho ny hatsiaka niaraka tamin'ny fanidiana noho ny fiakaran'ny tranga COVID.
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO roa teo aloha dia nanentana an'i Zurab hanemotra ny fifidianana amin'ny volana Janoary ho fiarovana ny kandidà, hamelana ireo solontena hanatrika, ary indrindra ho an'ny hafa hiditra amin'ny hazakazaka.
Toa izany no farany tao an-tsain'ny SG tamin'izay fotoana izay maniry handresy ny fifidianana indray amin'ny fanodikodinana ny fotoana, na dia mazava fa tsy nanaja an'i Bahrain.
Tamin'ny volana febroary dia notarihin'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili, ny delegasiona UNWTO ary nitsidika an'i Maraoka izy mba hiresaka momba ny antsipirian'ny fivoriana ara-dalàna ho avy izay mifantoka amin'ny fanabeazana sy ny tanora, ny fampandrosoana any ambanivohitra ary ny fanavaozana nomerika ary ny fivoriambe
Ny minisitry ny fizahantany maraokana Nadia Fettah Alaoui, niaraka tamin'ny delegasiona nandritra ny telo andro fitsidihana, dia naneho ny fahavononan'i Maraoka hampiantrano fivoriambe iray manan-tantara ”manan-tantara” Notsindriany ihany koa ny maha-zava-dehibe ny famelomana indray ny fizahan-tany iraisam-pirenena amin'ny fomba azo antoka sy maharitra.
Ny maraokana sehatry ny fizahantany, izay namoy ny 4.77 miliara dolara (MAD 42.4 miliara) tamin'ny taona 2020 noho ny fameperana fitsangantsanganana mifandraika amin'ny COVID-19, dia mitady izay fomba hampisondrotana ny firenena amin'ny toekarena aorian'ny tontolon'ny aretina.
Maraoka 37.5 tapitrisa.
Amin'izao fotoana izao, i Maraoka, firenena iray any Afrika Avaratra dia mitana ny laharana 124 manerantany amin'ny tranga COVID19. 110% i Marôka miaraka amin'ny fahafatesan'ny olona 251 isaky ny tapitrisa,
Raha ampitahaina dia mitana ny laharana 38 i Espana amin'ny tranga iray, ary 25 amin'ny fahafatesany.
Raha voamarina ny fanemorana ny fivorian'ny General Assembly, dia hampiseho ny tena fanoloran-tena ataon'ny Maraokanina amin'ny fizahan-tany eran'izao tontolo izao ity ary hitandrina ny tany azo antoka. Mampiseho ihany koa ny fahavononany hizara ny andraikitra amin'ny fanarenana ny fizahan-tany amin'izao tontolo izao, ary tsy ny vitsy ihany no afaka manatrika fivoriambe amin'ny fotoana ankehitriny.